Codsiyada ugu wanaagsan ee Android si aad u daawato TV-ga bilaash | Wararka Gadget
Barnaamijyada ugufiican ee looga daawado TV-ga bilaashka ah Android
Eder Esteban | | Aplicaciones
Telefoonkeena Android waxaa loo isticmaalaa waxyaabo badan, gaar ahaan marka ay timaado cunista waxyaabo badan oo warbaahin ah. Tani waxay u maleyneysaa inaan awoodno sidoo kale u isticmaal daawashada TV-ga. Waa wax aan qaban karno wakhti kasta, haddii aan isticmaalno codsi noo suurageliya. Nasiib wanaagse, xulashada codsiyada arimahan waa ballaaran yihiin.
Kadib waxaan kaaga tagi doonaa kuwa ugu fiican codsiyada aad ka daawan karto telefishanka bilaashka ah taleefankaaga Android. Waad ku mahadsan tahay iyaga, waxaad kaliya u baahan doontaa inaad kala soo baxdo arjiga su'aasha ah taleefankaaga oo waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato waxyaabahaan sida ugu macquulsan.
1 Adiga Ciyaartoyga TV-ga
2 Ciyaaryahan MegaTV
3 RTVE à la carte
4 LiveNetTV Android
5 Ciyaaryahan Atresmedia
7 Sida loo helo barnaamijyadan Android
Adiga Ciyaartoyga TV-ga
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee aan ku soo dejisan karno taleefannada Android ama kiniiniyada. Waad ku mahadsan tahay waxaan marin u heli doonnaa kumanaan kanaal telefishan oo kala duwan, in aan awood u yeelan doonno inaan ku cunno qulqulka qulqulka taleefankayaga, awood u lahaanshahooda sidoo kale wakhti walba way nool yihiin. Waxa ugu fiican ee ku saabsan arjiga ayaa ah inay amar ku bixiso waxyaabaha ku jira si dhammaystiran, si aan u helno iyaga, iyadoo kuxiran qaybta aan dooneyno inaan aragno.
Marka lagu daro noo ogolaanshaha inaan aragno waxyaabaha la sheegay, waxaan leenahay suurtagalnimada in loo isticmaalo sidii ciyaaryahan warbaahinta ah, oo xitaa waxay leedahay goleyaal iyo sheekaysi gudaha ah, oo ay uga qaybqaadanayso kuna xirmi karto isticmaaleyaasha kale ee adeegsanaya barnaamijka taleefannadooda Android ama kaniiniga.
Codsi kale oo naga siin doona helitaanka tiro badan oo ka mid ah kanaalada telefishanka, furan iyo lacagba. Markaa waxaan ku daawan karnaa tiro taxane ah, barnaamijyo, dokumentiyo ama filimo taleefankeena Android markasta oo aan rabno. Xulitaanka waxyaabaha iyo kanaalada ayaa ballaaran, taas oo macnaheedu yahay in had iyo jeer ay jiraan wax qof walba dhadhankiisa ku dhex jira codsigan, oo aan ku soo dejisan karno bilaash.
Dhammaan waxyaabaha ku jira arjiga Waxay u abaabulan yihiin qaybo, taas oo si cad u sahleysa helitaankooda. Marka hagitaanku waa fududahay, sidoo kale maxaa yeelay waxay leedahay qaab dhexdhexaad ah oo fudud oo la adeegsado, taas oo shaki la'aan aad ugu raaxeysan arrintan. Waxaa jira xayeysiis ku jira, taas oo xoogaa dhib ah mararka qaarkood, laakiin ma saameyn doonaan marka aad ku ciyaareyso waxyaabahaan taleefankaaga Android.
Codsi aan sidoo kale kala soo dagsan karno Android adigoon lacag bixin waa RTVE a la carte. Waa codsi noo oggolaanaya inaan marinno dhammaan noocyada ay ka kooban yihiin telefishanka dadweynaha Isbaanish Waa adeeg ay maalgashi badan ku samaynayeen muddo dheer, sidaa darteed waa codsi si fudud loo adeegsado, halkaasoo aan sidoo kale ku haysanno waxyaabo badan oo kala duwan. Shaqo wanaagsan ayaa laga qabtay arimahan, iyada oo nooc kasta oo taxane ah iyo barnaamijyo la heli karo.
Waa codsi gebi ahaanba bilaash ah, maaddaama aynaan bixinayn soo dejinteeda, sidoo kalena wax ku iibsanno gudaheeda. Intaas waxaa sii dheer, ma jiraan wax xayeysiis ah oo ku dhex jira, sidaas darteed waxaan diiradda saareynaa inaan karti u yeelanno inaan ku aragno waxyaabaha noocaas ah Android. Haddii aan leenahay Chromecast, waxaan u diri karnaa waxa ku jira oo waxaan ku daawan karnaa sidan telefishanka. Ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo arrintan la xiriira, taas oo ah mid aad u fudud in loo isticmaalo sidoo kale.
Codsigan wuxuu ku qoran yahay Ingiriis, laakiin waxaan u adeegsan karnaa dhib la'aan badan taleefannadeena Android ama kiniiniga. Thanks iyada waxaan marin u leenahay ilaa 150 kanaal oo telefishan oo kala duwan, inaad awoodid inaad ka wada aragtid taleefankeena adigoon lacag ku bixin. Xulitaanka waxyaabaha ayaa sidaas ballaaran, oo taxane badan la heli karo. Waxaa jira marinno nooc walba leh, oo loogu talagalay dhammaan dhagaystayaasha, codsigan. Marka way fududaan doontaa inaad hesho wax aad raadineyso.
Waxay leedahay fududahay in la isticmaalo interface, maxaa yeelay waxyaabaha ku jira ayaa loo abaabulay qaybo ku jira, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud in lagu dhex wareego. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay faa iidada weyn ee aanan laheyn xayeysiis, gaar ahaan maadaama qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadan si ay u daawadaan TV-ga bilaashka ah ee Android ay leeyihiin xayeysiisyo badan ama xayeysiis dadka waaweyn ah. Waxba maaha dareenkan, oo u oggolaanaya marwalba marin raaxo leh oo fudud oo taleefanka ah. Muuqaal kale oo muhiim u ah dadka isticmaala.
Codsi kale oo koobaya koox, kiiskan Atresmedia, oo leh marinno sida Antena 3, La Sexta, Nova, mega, A3Series, Neox. Marka codsigan ku saabsan Android waxaan ka helnay liis ballaaran oo ka kooban, kanaalladaan oo dhan, taxane u gaar ah iyo taxane lagu faafiyo iyaga, ka fikir taxanaha shisheeye. In kasta oo ay tahay taxanaha shisheeye, haddana had iyo jeer ma wada yeelan karaan dhammaan cutubyada laga heli karo dalabka.
Waa codsi si fudud loo isticmaalo, kaas oo leh interface aan soo bandhigin dhibaatooyin aad u tiro badan, oo u oggolaanaya inay fududahay in la helo waxyaabaha la sheegay mar walba. Waxaan sidoo kale arki karnaa waxyaabo toos ah oo isku mid ah, ama waxyaabaha la sii daayay. Intaa waxaa sii dheer, waxay bilaabayaan waxyaabaha ay iyagu ka kooban yihiin ee lagu sii daayay barmaamijkan sidoo kale. Waxaan sidoo kale ku isticmaali karnaa Chromecast taleefankeena Android.
Codsi kale oo wanaagsan oo loogu talagalay Android, oo aan ku soo dejisan karno bilaash, si loo helo kanaallada TV-ga iyadoon lacag laga bixin iyaga. Xaaladdan oo kale, markaan galno barnaamijka waxaan durbaba dooran karnaa waxa aan dooneyno inaan aragno, haddii aan dooneyno kanaalada TV-ga ee Spain, haddii aan raadineyno filimo iyo taxane ama haddii aan dooneyno inaan daawano isboorti. Marka waxaan dooran karnaa waqti kasta nooca nooca ah ee aan ku soo saari karno dhexdiisa.
Waa barnaamij aad u fudud in la isticmaalo, in kasta oo naqshaddu aysan ahayn tan ugu fiican oo dhan, laakiin ma soo bandhigeyso dhibaatooyinka isticmaalka, taas oo ah wax muhiimad u leh kiiskan. Sidaa darteed, waa codsi wanaagsan oo loogu talagalay Android, kaas oo si bilaash ah looga heli karo kanaallada telefishanka.
Sida loo helo barnaamijyadan Android
Haddii aad rabto inaad haysato waxa ugu fiican Barnaamijyada lagu daawado TV-ga waxaad ka heli kartaa halkan, halkeen ka helnaa a xul badan oo barnaamijyadooda ah si aad u daawato TV-ga bilaash taleefanka. Sidaa darteed, waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto barnaamijyadan iyo kuwo kaloo badan sidoo kale degelkan.
Way sahlanaan doontaa habkan si loo wada helo dhammaantood oo hel barnaamijyadaas ku habboon waxa ay raadinayaan, ha noqdaan kuwan aan soo sheegnay ama kuwa cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Aplicaciones » Barnaamijyada ugufiican ee looga daawado TV-ga bilaashka ah Android
Sida looga saaro lambarka taleefankaaga Facebook
Jiilka cusub ee barnaamijka IKEA Place ayaa hadda la heli karaa